ကုလသမဂ္ဂနဲ.ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မလား? ကြီးမားသောဖိအားပေးမှုနဲ. ရင်ဆိုင်မလား? | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ကုလသမဂ္ဂနဲ.ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မလား? ကြီးမားသောဖိအားပေးမှုနဲ. ရင်ဆိုင်မလား?	July 25, 2008
တိုင်းရင်းသားအသံကုလသမဂ္ဂနဲ.ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မလား? ကြီးမားသောဖိအားပေးမှုနဲ. ရင်ဆိုင်မလား?
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီနဲ. ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မလား? ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ဖိအားပေးမှုနဲ.ရင်ဆိုင်မလား? ဆိုသည့်မေးခွန်းကို အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာစစ်အစိုးရအားမေးလိုက်သည်၊
နောက်လတွင် မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်မည့်မစ္စတာဂမ်ဘာရီနဲ.တံခါပိတ်တွေ.ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ.ဝင်(၁၅)နိုင်ငံက ဂမ်ဘာရီ၏ခရီးစဉ်မှတိကျသောရလဒ်တစ်ခုခုမျှော်လင့်သည့်အကြောင်းကို ကုလဆိုင်ရာအမေရိကန် သံအမတ် ဇာမေးကာလီဇတ် Zalmay Khalilzad ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပြပါသည်၊
မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ခရီးစဉ်ကိုအခွင့်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံလိုက်ပါ၊ နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုမရှိရင် နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဆီချီတက်နေတယ်လို.ကျနော်တို.မြင်တယ်၊အဲဒါကို လုံခြုံရေးကောင်စီက သာမန်ကိစ္စ လို.ဆိုပြီးဆက်လက်သည်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို. အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါသည်၊
စစ်အစိုးရအနေနဲ. မျက်နှာသစ်တစ်ခုဖွင်.လစ်ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံတစ်ရပ်သဘောတူရမည်၊ တစ်ချိန်တည်မှာပင်၊ ဒေါ်စုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလည် လွှတ်ပေးရမည် ဟု သူကဆက်ပြောသည်၊
အကယ်၍ ဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူး ဆိုရင်၊ စစ်အစိုးရကို ပိုမိုအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ဖိအားပေးမှုများကို ကျနော်တို.လုပ်ဆောင်ရမည် ဟု ဆက်ပြောသည်၊
လွန်ခဲ့သော ၆ လလောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာ နောက်သို.ပြန်ဆုတ်သွားနေတယ် လို. ဗြိတိန်သံအမတ် ဂျွန်းဆိုဝါ John Sawers ကလုံခြုံရေးကောင်စီ၏အဖွင့်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်သည်၊
နိုင်ငံတာကာ၏တောင်းဆိုချက်များကို ပြန်မပြောနာမထောင်သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျနော်တို.အလုပ်လုပ်ဖို.ခက်ခဲနေသည် ဟု ဗြိတိန်သံအမတ်ကဆက်ပြောသည်၊
ကောင်စီ၏အလှည့်ကျဥက္ကဌဖြစ်သော ကုလသံအမတ် လီလုန်မင်းကလည်၊ အဖွဲ.ဝင် ၁၅ နိုင်ငံအနေနဲ. ဂမ်ဘာရီ၏ခရီးစဉ်ကို အပြည့်အဝထောက်ခံပြီး သူရဲ.ကြိုးပမ်းချက် အောင်မြင်မှကိုမြေင်တွေ.လိုကြောင်း ထပ်လောင်ပြောကြားသည်၊
မေလတွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဂမ်ဘာရီ၏ခရီးစဉ်ကို ရွှေးဆိုင်းခဲ့ရသည်၊
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဂမ်ဘာရီက လွန်ခဲ့သော မာတ်ခ်ျလတုန်က မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်ဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်၊
လူ ၃၁ ယောက်လောက်သေဆုံးစေသည့် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းနှိမ်နှင်းပြီးနောက်ပိုင်း ဂမ်ဘာရီကမြန်မာပြည်ကို ၃ ခေါက်သွားရောက်ခဲ့ပါသည်၊
ဗုဒ္ဓဟူနေ.တုန်ကလဲ၊ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်က၊ဂမ်ဘာရီ၏ခရီးစဉ်အတွက် မိတ်ဆွေဆုံဆည်ပွဲအစည်းအဝေးအပြီးမှာ ကုလသမဂ္ဂနဲ. ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို. မြန်မာစစ်အစိုးရအားတိုက်တွန်းလိုက်သည်၊
မိတ်ဆွေဆုံဆည်ပွဲအဖွဲ.အနေနဲ. စစ်အစိုးရနဲ.ဒေါ်စုကြည်တို.တွေ.ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အယုံအကြည်ရှိမှု နှင့် ကုလရုံချုပ်နဲ. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု များမြင်တွေ.လိုကြောင်း အထူးပြောကြားလိုက်သည်၊
ဒီဇင်ဘာလကတည်က ဖွဲ.စည်းထားသော အဖွဲ.၏အစည်းအဝးမှာ Australia, Britain, China, France, India, Indonesia, Japan, Norway, Russia, Singapore, South Korea, Thailand, the United States, Vietnam, the European Community and the European Union. နိုင်ငံများပါဝင်လာစေသည်။
Cooperate with UN or face more pressure: US tells Myanmar by Maura O’ConnorThu Jul 24, 9:31 PM ET The United States warned Myanmar’s military rulers that they must cooperate with UN mediator Ibrahim Gambari or face increased pressure from the Security Council.
US ambassador Zalmay Khalilzad told reporters after closed-door consultations with Gambari that the 15-member council expected “concrete results” from the UN troubleshooter’s visit to Myanmar next month.
“My message to the regime is to take advantage of Mr. Gambari’s visit,” the US envoy said. “Absent political progress, we see the potential for increased political instability and the council cannot remain indifferent to that.”
He added that the ruling junta must “turnanew page” and agree toapolitical roadmap for elections in 2010 as well as to the release of political prisoners, including opposition leader Aung San Suu Kyi.
“If there is not progress on these issues … we would have to look at other measures, bringing more pressure to bear on the regime,” Khalilzad said.
“Things have gone backwards in Burma (Myanmar) over the last six months,” British Ambassador John Sawers said ahead of the council meeting.
“We’re inadifficult situation in the sense that the Burmese government has not responded to the demands of the international community,” he added.
Vietnam’s UN Ambassador Le Luong Minh, the council chair this month, reaffirmed the 15-member body’s support for Gambari’s mission, set for mid-August, and said members wished him “success in his mission.”
The visit had to be postponed after Cyclone Nargis struck the country in May, leaving at least 138,000 missing or dead.
Gambari, the UN’s pointman in efforts to bring about reconciliation between the military regime and its pro-democracy foes, last visited Myanmar in March.
It was his third visit there since the regime launchedadeadly crackdown on pro-democracy protests last September, killing at least 31 people.
Wednesday, UN chief Ban Ki-moon also called for strong cooperation from Myanmar, after conveningameeting of the so-called Group of Friends to discuss Gambari’s visit.
The group specifically said “tangible progress” was expected “with regard to the resumption of dialogue between Aung San Suu Kyi and the government, the credibility of the electoral process, and the regularization of engagement with the good offices of the Secretary General.”